Vaovao - Fanaraha-maso ny fahazoan-dàlana mitondra sy ny fahamendrehana mihodina
Fanaraha-maso ny fahazoan-dàlana mitondra sy ny fahamendrehana mihodina
Fanaraha-maso ny fahazoana mitondra jiro sy ny fahamendrehana mihodina
Ny fandrefesana ny radial clearance ny fiterahana iray manontolo dia tsy mora. Ny hery fandrefesana dia mahatonga ny ferrule sy ny vatana mihodina ary ny fifandraisany tsy mihombo. Ny habetsaky ny fiovana dia singa marobe izay miteraka lesoka fandrefesana. Izy io dia mifandraika amin'ny herin'ny fandrefesana, ny toetoetran'ny fifandraisana ary ny singa mihodina. Ny toerana dia momba.
Ny fihenan'ny fihodinan'ny enta-mavesatra dia voamarina amin'ny toerana marindrano. Matetika ny peratra anatiny dia raikitra (na ny peratra anatiny nohazonin'ny tanana), ary ny peratra ivelany dia ahodina amin'ny tanana mba hanamarina raha misy feo sy fanakanana tsy mahazatra rehefa mihodina ny fiterahana.
Amin'ny ankapobeny, ny faharetan'ny fihodinan'ny miteraka dia lava, miadana ny fijanonana ary tsara ny malefaka. Mifanohitra amin'izany, fohy ny fotoana fihodinana, tampoka ny fijanonana ary tsy tsara ny malefaka. Noho ny karazany sy ny haben'ny rafitra miteraka, dia tokony hisy ny fepetra takiana amin'ny fahalalahana mihodina. Ohatra, ny tadin'ny baolina radial andalana tokana, ny filan'ny bolongan-tongony radial tokana, noho ny faritry ny fifandraisana kely eo anelanelan'ny singa mihodina sy ny ferrule, ireo bearings ireo dia maivana rehefa mihodina, raha toa kosa ny bearings boribory boribory roa ary ny bearings roller. ny mihodina Ny faritry ny fifandraisana eo anelanelan'ny vatana sy ny lalan'ny hazakazaka dia lehibe, ary ny lanjan'ny peratra ivelany dia kely. Rehefa voamarina ny fanodikodinan'ny fihodinana, na dia ampiana enta-mavesatra sasany aza dia mbola kely noho ny an'ny filalaovana baolina radial iray ihany ny fahazavana.
Ho an'ny bearings lehibe dia lehibe, rehefa ahodina izy ireo dia tsy tokony hisy ny fametahana azy, ary amin'ny ankapobeny tsy voamarina ny feon'ny fihodinana. Ho an'ny bearings beared tapered, ireto fomba manaraka ireto dia azo ampiasaina hanampiana ny fihenan'ny fihodinana. Toy izao manaraka izao ny fandidiana manokana: tsindrio ny fitondra mihetsiketsika ao anaty mandrel mandra-pahatongan'ny fametahana radial preload. Eo ambanin'ity preload ity dia ferrule rehefa mihodina dia tokony ahodina ireo singa mihodina. Raha mihetsiketsika ny singa mihodina fa tsy mihodina dia midika izany fa ny geometry ferrule dia misy lesoka be loatra na ny haben'ny singa mihodina dia tsy mitovy, ary ny fihodinan'ny fihodinana kosa dia ratsy ihany koa.